टीपीएस पुन दर्ता नगरेका नेपालीले पनि आवेदन दिन सक्ने
Ruler of the wasteland 576 days ago
Visitor is reading टीपीएस पुन दर्ता नगरेका नेपालीले पनि आवेदन दिन सक्ने
Visitor is reading Can you justify this picture????
Visitor is reading Bokaman's favorite girls
Visitor from US is reading HONGKONG Transit VISA?
Visitor is reading Ranas vs British
Visitor from US is reading --चौतारी - ८५ --
Visitor from US is reading stay away from cheat gals
[VIEWED 1557 TIMES]
Posted on 03-28-19 9:38 PM Reply [Subscribe]
अन्तिम पटक टीपीएस पुनदर्ता नगरेका नेपालीले समेत अब पुनदर्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । सन् २०१८ को मे २२ देखि जुलाई २३ सम्म टीपीएस रि रजिस्ट्रेशन नगरेका नेपाली टीपीएसवाहकले अहिले टीपीएस रिरजिस्ट्रेशनका लागि फर्म आई ८२१ आवेदन दिनसक्ने युएससीआईएसले जनाएको छ ।
तर त्यतीबेला रि रजिस्ट्रेशन गर्न नसकेकोबारेमा भने आवेदकले राम्रो कारण पेश गर्न सक्नुपर्नेछ । ढिलो रि रजिस्ट्रेशन गर्दा तोकिएको समयमा रि रजिस्ट्रेशन गर्न नसक्नाको कारणसहितको पत्र युएससीआईएसमा पठाउनुपर्नेछ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले टीपीएस अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका कारण तोकिएको अवधिमा रि रजिस्ट्रेशन नगरेकाहरुले सरकारी घोषणाले आफूलाई पारेको प्रभाव र त्यसका कारण आफू रि रजिस्ट्रेशन गर्न असफल भएको बारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । तोकिएको समयमा रि रजिस्ट्रेशन नगरेकाहरुले दिएको आवदेनमा गर्न नसक्नुको कारण उपयुक्त लागेमा युएससीआईएसले त्यस्तो आवेदन स्वीकृत गर्ने जनाएको छ ।
टीपीएसको खारेज गर्ने सरकारी घोषणाका तपाईले ढिलो फाइल गर्नुपर्नाको कारण होइन भने यो बिषय आवेदनमा समावेश नगर्न तथा इमान्दारिताका साथ कारण खुलाएर आवेदन पठाउन युएससीआईएसले सुझाव दिएको छ ।
टीपीएसबारे तपाईका कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई khasokhas@gmail.com मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
बिहिबार, चैत्र १४, २०७५ मा प्रकाशित
Posted on 03-29-19 2:12 AM [Snapshot: 267] Reply [Subscribe]
🔥🔥 Pearl Jam - Black 🖤 (Cover)🔥🔥